Prof. Geedi oo Dowladda Federaalka ah ku eedeyey in ay siyaasad qaldan ku maamulayso dalka – Radio Daljir
Agoosto 12, 2013 4:54 b 0
Nairobi, Aug 12, 2013 – Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof, Cali Maxamed Geedi ayaa dhaliilay dhaqdhaaqa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan xukunka dalka iyo siyaasad uu ku tilmaamay in ay tahay mid qaldan oo dalka lagu hagayo.
Prof. Geedi wuxuu aad uga hadlay talada dalka ee wakhtigan oo uu sheegay in tahay mid kooban shaqsiyaad ka tirsan dowladda, iyadoo meesha laga saaray in la mideeyo talada guud ee wadanka si talabooyin cusub oo horumar leh loo qaado.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay is bedel sameeyaan si looga boxo dhibaatada daba-dheeraatay, wuxuu ku cel celiyey in loo baahan yahay in dalka si wanaagsan loo maamulo.
Dhinaca kale Prof. Geedi wuxuu sheegay in aysan suurta-gal ahayn in la saaro ciidanka Kenya ee jooga Jubooyinka, Ra?isal wasaarihii hore wuxuu sheegay in Kenya ay u joogto Soomaaliya taageerada Dowladda.
Hadalka ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. Cali Geedi ayaa wuxuu imanaya xili uu ka qeyb galay dhowaan shir ka dhacay Nairobi, kaasi oo lagu sheegay in uu yahay mid lagu majaxaabinayo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.